Umzibi wamayeza wokunyanga amanzi
Ishishini lePulp & Paper
Umzi mveliso weoli
Wamkelekile kwi website yethu
Ngoko Kungani OuBo Chemical
Specialised & Indlela Ephumelelayo
Siye ezikhethekileyo mveliso Polyacrylamide iminyaka 8 umgangatho ophezulu kunye nexabiso kukhuphiswano. Iqela lethu zobugcisa nenxaxheba pre-kwiintengiso, ukuthengiswa kunye nasemva-iintengiso inkqubo zokuxhasa kuwe ukhetho, uvavanyo kwimveliso kunye inkonzo yasemva ukuthengiswa. thembisa: liqela leengcali zobugcisa ukukunceda wenze ukhetho olufanelekileyo.
Iqela lethu zobugcisa nenxaxheba pre-kwiintengiso, ukuthengiswa kunye nasemva-iintengiso inkqubo zokuxhasa kuwe ukhetho, uvavanyo kwimveliso kunye inkonzo yasemva ukuthengiswa. thembisa: liqela leengcali zobugcisa ukukunceda wenze ukhetho olufanelekileyo.
Fumana A Quote
805Room, No.13, B Zone, Wanda lendlu, Qingdao, kwiPhondo Shandong
Impembelelo yobunzima beMolekyuli kwiPolyacry...
Ukucocwa kwamanzi amdaka kwimizi-mveliso, kucace...
I-Cationic polyacrylamide yamanzi odaka...
I-Cationic polyacrylamide yetyuwa ephezulu yayi...
© Copyright 2011-2020 Oubo Chemical Onke Amalungelo Agciniwe.